नयाँ मोडेलमा आएको ३५० सिसिको बुलेटको दाम ह्वातै घट्यो, हेर्नुहोस कती मुल्य ? - Kavre Online
कम्पनीले बुलेट एक्समा ३४६ सिसि सिंगल सिलिन्डर कार्बुरेटर इन्जिन लगाएको छ । यसले अधिकतम १९.८ हर्ष पावर र २८ एनएम पिक टर्क दिन्छ । यसको फ्रन्टमा डिस्क र रियरमा ड्रम ब्रेक लगाइएको छ भने, बाइकमा सिंगल च्यानल एबीएस, रियर ह्वील लिफ्ट अफ प्रोटेक्शनको विशेषता दिइएको छ ।
167 Post Views
Prevमुखमा घाउ आएको छ ? सावधानी अपनाउनुहोस्, खानपानमा ध्यान दिनुहोस्
Nextसन्दिपले एकै दिन दुई करोड कमाएपछि
हेर्नुहोस त विदेशको बाटोमा चल्ने गाडी नेपालमा ।अचम्मको सुबिधा भएको बस जहाँ भाडा तिर्न कार्ड चाहिन्छ (हेर्नुहोस भिडियो)